Daynsiga guryaha dadka wayn, amaahda dib looma bixinayo ilaa amaahdaha u dambeeya, la amaahdaha ama lamaanaha u qalmaa uu dhinto, iibiyo guriga ama u guuro guri.
Wakhtigaas, hadhaaga buuxa ee amaahda, waxa uu noqon doona mid la bixinayo ama guriga waxa uu noqon doonaa mid ku guul daraystay bixinta lacagta, taas oo keeni doonta dib ula wareega guriga. Badanka tusaalooyinka, gurigu waa in la iibiyaa si loo bixiyo amaahda.
Badanka daynsiga guryaha dad waa wayn ee maanta waa caymisya Maamulka Guriyanta Federaalka (FHA), sidii qayb ah Barnaamijkeeda Beddelka Qiimaha Guriga Daynsiga guryaha (HECM) .
Haddii aad u qalanto, waa inaad marka koowad la kullantaa la taliyaha ay ansixisay Waaxda Guriyaynta iyo Horumarinta Magaalada Maraykanka(the U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD)) Hoosta sharciga Minnesota, amaahdahu waa inuu siiyaa amaahdaha mustaqbalka ugu yaraan liiska saddexda wakaaladood ee la talinta guraynta ee madaxa banaan. Amaahiyaha sidoo kale waa inuu helaa caddaynta in codadahu dhab ahaan uu helay la talinta.
Fahanka noocyada daynsiga guryaha dadka waa awayn
Waxaa jira labba nooc oo daynsiga guryaha dadka waa wayn ah oo laga heli karo Minnesota:
Su’aalaha la waydiinayo ka hor, muddada, iyo ka dib
Haddii aad ka fekerayso wax ku saabsan daynsiga guryaha dadka waa wayn, kuwa soo socdaa waa qayb su’aalo muhiim ah oo aad waydiin lahayd. Kala hadal qoyskaaga. La kullan la taliyaha la ansixiyay ee HUD. La tasho la taliye la aaminsan yahay, oo dhaqaale ahaan madax banaan ama qareen.
Su’aalahee ayaan waydiin lahaa MUDDADA nidaamka daynsiga guryaha dadka waa wayn?
Miyaan fahmay masuuliyadayda sidii amaahde?